'हरियाली संस्था'को उदाहरणीय कार्य, अति विपन्न बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री सहयोग
शुक्रबार, १३ पौष २०७५,	सुमन लम्साल.	1.24K
कावसोती, नवलपुर, १३ पुस
कावासोती नगरपालिका वडा नं. १६ का अति विपन्न बिद्यार्थीहरु ५० जनालाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरि ५० थान झोला, कापी, कलम तथा १०० पाकेट सेनेटरी प्याड र २ थान डस्टबीन समेत हस्तान्तरण गरिएको छ ।
हरियाली संस्थाको आयोजनामा बातावरण जनजागरण बिकास मञ्चको सह आयोजना तथा कावासोती नगरपालीका वडा नं. १६ को आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न सो कार्यक्रम हरियाली संस्थाका अध्यक्ष एल० एन० दवाडीको अध्यक्षतामा तथा कावासोती नगरपालिका १६ नं. वडा अध्यक्ष एकादत्त वस्तीको प्रमुख आतिथि सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि वस्तीले विपन्न बिद्यार्थीहरुको शैक्षिक स्तर माथि उठ्न यस कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताएका थिए । कावासोति १६ स्थित जनता मा० बि० र दिपेन्द्र आधारभुत बिद्यालयमा अध्यनरत अति विपन्न बिद्यार्थीहरु को लागि सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
निरन्तर यस्ता कार्यक्रम कावासोति नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा गर्दै आईरहेको आयोजक हरीयाली संस्थाका अध्यक्ष एल० एन० दवाडीले बताउनुभयो । साथै सो कार्यक्रममा प्रशिक्षक अन्जु रिजालले किशोरी स्वास्थ, महिला हिंसा सम्बन्धि प्रशिक्षण दिनुभएको थियो भने अभियान्ता सुमन लम्साल, केश कुमारी कुँवर लगायतले मन्तव्य राखेकी थिईन् ।